डाक्टरले भने पछी आखा चिम्लेर खोलिदिए.. अन्तिम सम्म यस्तो गरे ! पुरा पढ्नुहोस, VIDEO सहित — newsparda.com
डाक्टरले भने पछी आखा चिम्लेर खोलिदिए.. अन्तिम सम्म यस्तो गरे ! पुरा पढ्नुहोस, VIDEO सहित
काठमाण्डौंको बानेश्वरमा बस्ने उनी हाल नेपाल कमर्श क्याम्पसमा बीबीए अध्ययनरत रहिछन् । घर भने प्युठानको बाग्दुला रहेछ ।केही समयअघि बसाइ सरेर राप्ती गाउँपालिका अर्थात हाम्रै गाउँमा आएका रहेछन् उनका परिवार । हामी त अब छिमेकी भएछौ नी नाम के हो भनेर मैले सोधेँ । उनले मुस्कुराउदै जवाफ दिइन् ‘छिमेकीको नाम अब आफै पत्ता लगाउनुस् म त नभन्ने ।’ यतीभन्दा म केही समय बोल्नै सकिन चुप लागेर बस्न बाध्य भए ।मलाई अल्लारे केटा भनेर नाम भनिनन् कि ? वा फेसबूकमा रिक्वेस्ट पठाउँछ भनेर पो होकी ? नाम नभनेको, यति सोच्दै गर्दा उनले आफ्नो नाम सुनिता गाहा मगर (नाम परिर्वतन)भएको बताइन् । छिमेकीको नाता जोडिसकेको हुँदा अब हामीलाई एकअर्काबीच गफगाफ गर्न कुनै असहजता बाँकी थिएन ।गफ यसरी जम्न थाल्यो कि समय बितेको पत्तै भएन क्षणभरमा बुटवल पुगेछौं । अक्सर यति चाँडो बुटवल पुगेकोजस्तो अनुभव यसअघि मलाई भएको थिएन ।…यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला 👇 https://youtu.be/0LNDv5QxYT0 https://samacharpostdainik.com/ बाट साभार गरिएको ।
बामदेव ठोकेरै भन्छन्ः ‘मलाई २ वर्ष मात्रै प्रधानमन्त्री बनाए १० वर्षमा चीनलाई उछिन्छौं’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा कोरोना भाइरसको महामारी सकिएपछि उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । साथै पार्टीमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने उनको प्रस्ताव छ ।
कोरोना भाइरसको संकट सकिएपछि आफूले प्रधानमन्त्री छाड्ने र उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरे । यसका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने गरी संविधान संशोधन गर्न वा प्रतिनिधिसभाको कुनै एक सिट खाली गरेर पनि ल्याउन आफू तयार रहेको उनले बताए ।
यसै सन्दर्भमा नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले केही समय अगाडी भनेको एक समाचार यहाँ राख्न चाहन्छौं । उनले भनेका थिए “मलाई २ वर्ष मात्रै प्रधानमन्त्री बनाए १० वर्षमा चीनलाई उछिन्छौं “ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमले आफुलाई प्रधानमन्त्री दिए दुई वर्ष मै समाजवाद ल्याउने बताएका छन् ।
आइतबार ‘विश्व व्यवस्था र चीन स् नेपालमा समाजवादको सम्भाव्यता’ विषयमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यशालामा बोल्दै नेता गौतमले अबको ५ वर्षमै नेपालमा समाजवाद आउन सक्ने दाबी गर्दै आफुलाई २ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्‍न दिएमा झन् छिटो समाजवाद ल्याइदिने जिकिर गरेका हुन् ।
‘५ वर्षमा नेपालमा समाजवाद आउँछ । १० वर्षमा समृद्धि र विकासमा चीनलाई उछिन्छौं’, काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाईंले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘मलाई दुई वर्ष मात्रै प्रधानमन्त्री बनाए झन् छिटो ५ वर्षमा नेपालमा समाजवाद आउँछ । १० वर्षमा समृद्धि र विकासमा चीनलाई उछिन्छौ । त्यो ग्यारेन्टी नेकपालले लिनु पर्छ । नेपालमा समाजवाद अवश्यम्भावी छ ।’
नेता गौतमले आफ्नो पार्टीको दस्तावेजमा असहमति यथावत रहेको जिकिर गरे । ‘नेकपाको दस्तावेजमा उल्लिखित जनताको जनवादमा र विधानमा असहमति छ’ उनले भने । नेपालमा समाजवाद हवाई कल्पना मात्रै नभएको उनको जिकिर थियो । उनले यसो भन्दा कार्यक्रममा अन्य टिप्पणीकर्ता र सहभागीहरु हाँसेका थिए । https://youtu.be/0LNDv5QxYT0
तु घर बिक्रीमा मात्र7लाख 99 हजार झुटो होईन सिधै धनि-को नम्बर छिटो हेर्नुस….
10 हजार बर्ष पुरानो मन्दिर जे माग्यो तेहि पुग्ने ॐ लेखेर 1 Share. गर्नुहोस
धनलाभ हुनुअघि देखिन्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी पुरा पढ्नुहोस, सेयर गरौ
छोरी गर्भवती हुने डरले आमा निरन्तर ३ महिने सुई लगाइदिन बाध्य !
५ ओटा सोमबार परेको विशेष साउन, यी ६ राशिलाई मिल्नेछ शुभ फल